Chiratidzo Chiripo chinokutendera kuti ufone zvakavanzika | IPhone nhau
Chiratidzo: chishandiso chinokutendera iwe kuti uite mahara akavharidzirwa mafoni
Alex Ruiz | | IPhone maapplication, IPhone Kuchengetedza
Pese pavanoshandisa nharembozha dzakadai semafoni efoni vanonyanya kunetsekana nezve kuchengetedzeka uye kuvanzika kwedata ravo iro rinogona kusvika pamaoko evasori vamasangano. Vagadziri ve Whisper Maitiro gadzira yakavhurwa sosi application inonzi Chiratidzo, izvo zvichatibvumidza kuti tiite yakavharidzirwa mafoni ekuwedzera kuchengetedzeka uye kuvanzika. Iyo kambani yatove nezvikumbiro zveApple senge RedPhone uye TextSecure iyo yakavharidzira mafoni neSMS zvakateedzana, ikozvino vanouya kuIOS neSignal, iyo inoedza kubatanidza zvese zviri zviviri kuita seyakareruka.
Chinhu chakanakisa nezve Signal ndeichi nyore kwekugadzirisa, isu tinongofanirwa kuzivisa yedu nhamba yefoni uye isu tinogamuchira meseji ine kodhi yekusimbisa. Kubva ipapo zvichienda mberi tichava nerunyorwa rwevanoshamwaridzana vanoshandisa chishandiso uye zvakare nhare idzo dzine Android neiyo RedPhone application. Kuva kushandiswa kwe open source chero mugadziri anogona kuidzidza uye kuona kuchengetedzeka kwainovimbisa. Kushanda kwayo kuri nyore, ine huwandu hweseva pasi rese, iyo inonongedzera kufona kune iye anogamuchira. Kana vachipfuura nemaseva ekambani ivo havasiye trace mune chero ipi, nekuda kwekunze zvinangwa zvinongoonekwa sekufona kwatinoita kune iyo Signal server.
Mamwe mafomu ekunyora mafoni kana mameseji akatobuda, asi izvi zvinowanzobhadharwa uye hazvina mashandisiro emushandisi. Iyo ndiyo poindi yakasimba yeChiratidzo, ndizvo dzakasununguka zvachose uye inogona kutorwa pasi kubva ku App Store. Kunyangwe ichiri vhezheni inogona kunge iine kukanganisa, vagadziri vayo vari kushanda pakuvandudza iyo uye nekukurumidza kusanganisa rutsigiro rwekutumira mameseji. Isu tinobatanidza iyo link kuburitsa kwakananga pasi pemitsara iyi.
Wakamboshandisa Signal here? Iwe unofungei nezvekushandisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone Kuchengetedza » Chiratidzo: chishandiso chinokutendera iwe kuti uite mahara akavharidzirwa mafoni
Alex, yakanaka posvo ...
Zvingave zvakanaka kana mumusoro ukawedzera zita rizere kuApp neiyo ye «Signal- Yakavanzika Messager»; sezvo muAppStore mune akawanda mafomu ekushandisa anonzi chiratidzo uye saka hapana nyonganiso.
Ndine App yakawanda inotanga neChiratidzo ... asi iyi iri muchinyorwa ndeye "Signal- Yakavanzika Mutumwa"
Bhiriji rakanaka Adal
Pindura kuna La_YIyi
Zvakafanana zvakaitika kwandiri…. chiri «Chiratidzo- Chakavanzika Mutumwa»…. vanofanira kuitsvaga nezvose uye chinyorwa….
Izvo hazvishande kwandiri, ini handigashire iyo SMS ine kodhi kana yekufona yekusimbisa.
Zvinoreva zita rokutanga CARRIZOSA akadaro
Zvakanaka, asi sezvo kuvanzika kuri kutsvagwa, registry ingadai yakaitwa nemazita evashandisi kwete nhamba dzenhare.
Kuita mafoni akavharidzirwa kune masevhisi akadai seOstel.co ayo anotendera iwe kuti uite zvakafanana uye iwe unogona kushandisa chero softphone inotsigira SRTP protocol, pakuibuditsa iri ZRTP uye inowanzobhadharwa pa iPhone. (Yemahara pa Android neCsipSimple pe)
Kutanga kubva ipapo hongu: Sezvavakatotaura kare: Hazvibvumirwi neChiratidzo chete (tsvaga "Signal- Yakavanzika Messager").
Zvave zvichida kuziva kwandiri kuti haana kundirega ndichiongorora neinternet Wi-Fi… Nekudzima iyo Wi-Fi (chete neyangu isina kunaka 3G kubatana) ndakakwanisa kuongorora kumisikidza kwefoni (izvi zvinobvisa mapoinzi) .
Kusava nechokwadi akadaro
Iwe unogona kufona kune chero nhamba yefoni uchishandisa iwo maminetsi eyakaunzi yako,? Kana zvirizvo, pane inorambidzwa nekambani here? Kana inogona chete kubva kuSignal Mushandisi kuenda kuSignal Mushandisi? Iwe unoda wifi internet, 3G, kufukidzwa kana chii? Chii chisina kutaura chero cheichi uye ndicho chakakosha chinhu (zvirinani kwandiri, hehehehehehehe)
Vhocha. Ndakapusa. Ndakanga ndisina kuverenga. Izvo zvinongova kubva kuchiratidzo kuenda kune vanoshandisa chiratidzo. Uyai, seWhatsApp. Na tango, hazvisi zvese zvinopenya ndarama. 💩💩💩 (wega pfungwa, hongu)
Hondo huru yemaprank, shongwe nyowani yekudzivirira kubva kuCartoon Network